हिमाल खबरपत्रिका | ‘विकास’ को बलमिच्याइँ
‘विकास’ को बलमिच्याइँ
विकासको लागि अपनाइएको पारामा परिवर्तन अत्यावश्यक छ।
देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहटका नगरप्रमुख धर्मेन्द्र पटेलसमक्ष सडक विस्तारले धरहरी गाउँमा पारेको समस्याबारे जानकारी गराउँदै वडा–७ का वडाध्यक्ष अनिल झा ।
गाउँ देहातमा अहिले पनि यस्ता मान्छेहरू भेटिन्छन् जो आफ्नो कुरा अथ्र्याउन कुनै लोककथा वा आहान प्रयोग गर्छन् । तिनै आहान मार्फत उनीहरू गम्भीर कुरालाई पनि बडो सहज र सरल शब्दमा प्रस्तुत गरिदिन्छन् । तर त्यो बुझन तपाईंले स्थानीय समाजको परिवेश जानेको हुनुपर्छ । बाराको सिमरौनगढमा आफ्नो आँप बगैंचाको रखवाली गरिरहेका एक किसानले यस्तै एउटा लोककथा सुनाए, जसबाट अहिलेको हाम्रो विकास बुझन सजिलो हुन्छ । विकास के हो ? कसलाई चाहिएको छ विकास ? यो कुरा बुझन ती किसानको लोककथा सुनौं ।
राजाले एउटा भव्य पोखरी खनाउने भएछन् । आदेश पाएपछि हर्ताकर्ताहरू काममा जुटे । समस्या यो आयो कि पोखरी बनाउने भनिएको स्थानमा एउटा फकिरको झेपडी परेछ । सिपाहीहरूले फकिरलाई झेपडी कतै अन्तै सार्न आदेश दिए । तर जति दबाब दिंदा पनि फकिरले झेपडी भत्काउने सुरसार देखाएनन् । अन्तिम पटक ताकेता गर्न पुगेका सिपाहीहरूलाई फकिरले भनेछन्, “पहिला मलाई यो राज्यको कुनै जान्नेबुझने व्यक्तिसँग कुरा गराऊ ।”
आखिरमा राजा आफैं फकिर छेउ पुगेर पोखरीको महŒवबारे व्याख्या सुनाए । राजाको लामो व्याख्या सुनिसकेपछि फकिरले भने, “तपाईंलाई आफ्नो दरबार जति प्यारो छ, मलाई यो झेपडीको त्यति नै माया छ । तपाईंलाई आफ्नो दरबारमा निद्रा लाग्छ कि लाग्दैन, मलाई थाहा छैन, तर म यही झेपडीमा गहिरो निद्रा सुत्छु । यस्तो आनन्ददायी झेपडीलाई म कहाँ र कसरी सारुँ ?”
राजाले फेरि पोखरी बनेपछि राज्य कसरी लोककल्याणतिर लम्कन्छ भन्ने बेलीविस्तार लगाए । यो सुनेपछि गम्भीर भएका फकिरले भने, “लोककल्याणको लागि पोखरी खनाउन थालिएको हो र यसबाट राज्यलाई भलो हुन्छ भने म आफ्नो झेपडीको बलिदान दिन राजीखुशी तयार छु । त्यसबापत तपाईंसँग कुनै मुआब्जा पनि माग्दिनँ । राज्यको एउटा नागरिक भएको नाताले मलाई इज्जतपूर्वक यो कुरा भनिएको भए अहिले तपाईं स्वयम् यहाँसम्म कष्ट गर्नुपर्ने थिएन ।”
राजाले कुरो बुझेर आफ्ना हर्ताकर्ता र सिपाहीहरूबाट भएको अशिष्टताको लागि माफी मागे । फकिरले आफ्नो झेपडी अन्तै सारे । त्यो ठाउँमा विशाल पोखरी बन्यो ।
तराई–मधेशका गाउँतिर अहिले जताततै सडक विस्तार भइराखेको छ । यस वर्षको बजेट खर्च गर्न सबै स्थानीय तहलाई हतारो छ । यसको लागि सबभन्दा सजिलो तरिका भएको छ– सडकमा माटो पुर्ने काम । पहिला भन्दा नयाँ के हँुदैछ भने सडकलाई चौडा पनि पारिंदैछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको समयमा सडकमा माटो पुर्ने काम त हुन्थ्यो, तर चौडातिर ध्यान दिइँदैनथ्यो । अहिले चौडा समेत गरिंदा दुवैतर्फ घरहरू भत्काउने काम पनि भएको छ । विकास घरमै ठोक्किन आइपुग्दा कतिले विना मुआब्जा आफ्नो नम्बरी जग्गा छाड्नु परेको छ । कम घडेरी हुनेहरूको उठिबास भएको छ । विकासले टोकिदिएका घरहरू मर्मत गर्न पनि गाह्रो छ । एक त सबैसँग त्यसको लागि आवश्यक स्रोत छैन । अर्को, गाउँहरू युवाविहीन भएकोले जनशक्ति नै छैन ।
पर्साका दलित अधिकारकर्मी शिवनारायण रामले निर्वाचितहरू आएपछि घर कोतरिने र विस्थापित हुनेमा दलित धेरै परेको बताए । हिजो कर्मचारीतन्त्रले विकासको नाममा गर्न नसकेको साहस अहिलेका निर्वाचितहरूले गरेको उनको भनाइ छ । किनारामा पारिएका भुईं सतहको मान्छे वा सामान्यजन जे भनिए पनि त्यो वर्गका अगुवा रामले जब ‘हो, हामी गरीब छौं, तर हाम्रो पनि इज्जत छ’ भने म भित्रैदेखि हल्लिएँ ।
विकास कसैको दया–माया या दान होइन, जनताको अधिकार हो । र, यो जबर्जस्ती थोपर्न मिल्ने चिज पनि होइन । तर, भई के राखेको छ भने कतिपय ठाउँमा मनपरी तरिकाले डोजर चलाउने गरिएको छ । सडकलाई गाउँको आवश्यकता भन्दा बढी चौडा गरिंदैछ । त्यसको पछाडि धेरैजसो ठाउँमा छोटो समयमै ठूलो बजेट सक्ने चलखेलको चाहना त कतै मिचेर पीर पार्ने पूर्वाग्रहले काम गरेको देखिन्छ ।
कथामा राजा विवेकी हुनाले फकिरले विकासका नाममा अपमानित हुनुपरेन, तर मधेशका गाउँघरमा अहिले जताततै विकासका पीडितहरू भेटिन्छन् । जुन स्थानीय तहलाई आफ्नो मानियो, त्यसले नै बलजफ्ती गर्दा धेरैको चित्त कुँडिएको छ । विकास ल्याउन हतारिएकाहरूले जनतालाई अपमानित गरिरहेका छन् । आजका जनप्रतिनिधिले त हिजोको बलमिच्याइँको शैली छाड्नुपर्ने होइन र ?